umshuwalense wemoto ka-peter d james and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani - Gary Bailey
Tag: umshuwalense wemoto ka-peter d james and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani
Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani South Africa
Umshuwalense wemoto uyinto ebaluleke kakhulu kubo bonke abanikazi bemoto, kungakhathaliseki ukuthi bangaphi. Wonke amagesi kahulumeni anezidingo zawo siqu. Kunezinye izidingo ezidingekayo abashayeli ukuze bakwazi ukuthenga umshwalense futhi bakwazi ukushayela ngaphandle kokungena enkingeni. Futhi, umshuwalense wemoto ungase ube yinto ebiza kakhulu futhi eyinkimbinkimbi. Abashayeli abaningi bazithola besebenza futhi abaziqondi izimo eziphuthumayo ezihlanganisiwe. Kubalulekile ukukhuluma nochwepheshe mayelana neminye yomshuwalense, Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani ku South Africa kodwa kukhona okuyisisekelo ukuthi wonke umuntu ofuna umshuwalense wemoto kufanele aqonde.
Ngomshwalense wemoto yomshuwalense, ngokuvamile kunezinhlobo ezimbili zezicelo ongayithola futhi ziyimpahla kanye nemfanelo. Ngokuvamile, Umshuwalense Wokukhokha umthwalo wemfanelo uzokufihla umnikazi wemoto ngazo zonke izizathu ezinjengezinhloso zokulimaza noma ukunganaki. Umshuwalense womhlaba, ngakolunye uhlangothi uhlanganisa noma yimuphi umonakalo owenzelwa emotweni yakho noma umonakalo owenziwe kwenye imoto.
Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani ku South Africa ?
Ukuthengwa komshuwalense wemoto kungaba umsebenzi obangele. Ngaphambi kokuthenga inqubomgomo, kuwumqondo omuhle ukufunda ngezinhlobo ezahlukene zokubheka nokuthi yikuphi okushiwo ngempela.
Ngaphambi kokuthenga umshwalense wezimoto, kufanele uqonde izingxenye ezihlukene zokuhlanganisa: umthwalo wemfanelo, ukushayisana nokubanzi. Ngayinye yalezi zingxenye iyingxenye ye-premium yomshuwalense wemoto oyikhokhayo. Nakuba kungase kube isilingo sokuthola umshuwalense wemoto eshibhile, kungcono ukukhetha ukuqiniseka ukuthi wena nemoto yakho zivikelekile ngokwanele.
Izinhlobo Ezinhlanu Zokuqala Zomphakathi
Le yingxenye yomshuwalense wemoto oyomelwe ube nayo - ikuvikela uma unecala lenhlekelele. Ungabekwa icala lokulimala kwenye imoto, kodwa futhi nezindleko zezokwelapha, umholo olahlekile, nobuhlungu nokuhlupheka kwanoma ubani omele. Imingcele yemingcele ibalwa ngamashumi ezinkulungwane (noma ngezinye izikhathi ngamakhulu ezinkulungwane) zamaRandi. Isibonelo, i- "50/100/25" kusho ukusakazwa komzimba owodwa ka-$ 50,000 womuntu oyedwa, imali engu-$ 100,000 yokuthengwa kanye no-$ 25,000 wokulimala kwempahla.
Lokhu kukhishwa kukhokhelwa ukulungiswa kwemoto yakho, noma ukushintshwa kwezimakethe zayo uma kuqhathaniswa uma ubhekene nomunye imoto noma ushaye okuthile-kungakhathaliseki ukuthi ubani onecala. Uma unomoto osekhulile, ungase ube ngcono ngaphandle kwalokhu kukhishwa.
Lokhu kubhadela kukhokhelwa ukulungiswa noma ukushintshwa kwemoto yakho uma sebiwe noma ezilimele emlilweni, izikhukhula noma imimoya ephakeme. Futhi, uma unemoto endala, kungenzeka ukuthi awudingi lokhu kukhishwa.
Ukubambisana nezigaba eziphelele zenqubomgomo yakho, ehlangene ndawonye ngamaphesenti angama-40 noma ngaphezulu kwe-premium yakho, ngalinye libandakanya inani elidonswayo kufanele ukhokhe ngaphambi kokuba umshwalense ukhawule ngokufaka isicelo ngasinye. Isibonelo, uma unemali engu-$ 500, futhi ulahlekelwe u-$ 1,00
ingafaka futhi ukukhokhelwa kwezokwelapha ngawe nabagibeli bakho (kungakhathaliseki ukuthi ubani onecala), nokuvikelwa komshayeli ongaqinisekisiwe uma kwenzeka imoto yakho ishaywa ngumshayeli ongagunyaziwe. Izinqubomgomo eziningi nazo zinikeza izengezo ezincane ezinjengokubuyisela okuqashisayo (uma kwenzeka imoto yakho ingekho ngenxa yokulungiswa ngemuva kwengozi), kanye nomshuwalense wokudubula.
Cishe wonke amazwe adinga abashayeli ukuba bathathe umshuwalense wemfanelo, kodwa kwabanye bathi inani lokubiza elidingekayo liphansi kakhulu - phakathi kwamaphesenti angu-15 kuya ku-$ 25,000. Kungakhathaliseki ukuthi yimuphi umshuwalense wemfanelo owenziwe ngumbuso wakho, kuwukuhlakanipha ukuthola inqubomgomo enomkhawulo wokufaka imali okungenani u-$ 100,000 umuntu ngamunye omele futhi u-$ 300,000 ngengozi, ngoba imingcele ephansi angeke ikuvikele ngokwanele. Eqinisweni, ngokusho kwe-Insurance Information Institute, eminyakeni yamuva nje umklomelo wokulimala komuntu siqu kuleso simo kuye kwaba ngu-$ 323,000. Kumele futhi ucabange ukuthi okungenani u-$ 50,000 ekukhunjweni kwempahla yokulimala kwempahla. Ngisho noma umkhawulo wesimo ungase ube mkhulu kakhulu, ukulungisa izikweletu kungenezela ngokushesha ezimotweni zokunethezeka kanye nezinye izimoto ezibiza kakhulu.
Indlela esheshayo yokusika isikhwama somshuwalense wemoto yakho ukwandisa ukwedluliswa kokushayisana kwakho nokuhlanganiswa okuphelele . Ukukhulisa imali yakho esivela ku-$ 200 noma $ 250 umkhawulo kuya ku-$ 500 kunganciphisa amaphesenti angu-10 kuya ku-15 ngonyaka kusukela ku-bill yomshuwalense wakho wemoto. Kodwa-ke, kufanele uhlole ngokucophelela lokho okumele ukwazi ukukulondoloza mayelana nezindleko eziphezulu eziphuma ngaphandle. Uma ungenakukwazi ukukhokha imali engaphezulu, kufanele ukhethe i-deductible ephansi.
Uma ushayela imoto endala, ungakwazi ukuyeka ukusabalala okuphelele nokudibanisa ngokuphelele. Eqinisweni, uma imoto ingaphezu kweminyaka emihlanu ubudala, kufanele ucabange ngalolu khetho. Akukona umqondo ukugcina ama-premium premium yomshuwalense wezimoto ezidakayo uma imoto ingabalulekile kakhulu. Khumbula ukuthi noma yikuphi ukukhokha kuzoba ngenani lemakethe kuphela yale moto. Njengomthetho wesithupha, ungagcini ukufakwa uma ngabe i-premium ye-collision nephelele ingaphezulu kwamaphesenti angu-10 we-value esetshenzisiwe yokuthengiswa kwemoto.
Iningi lifuna ukudluliselwa kwezimoto okungagunyaziwe / okungaphansi kwesibindi, ngokuvamile u-$ 20,000 kuya ku-$ 40,000 ekuvikeleni. Uma imoto yakho ishaywa umshayeli ongenayo umshwalense wezimoto noma engenawo umshwalense owanele, lokhu kuzothola ukulimala kubagibeli bakho nezinye izindleko umshwalense wezempilo ongajwayelekile awufihli. Ibuye ikuvikele uma umshayeli ongeke aqiniseke akushaya ngenkathi ugibela ibhayisikili noma uhamba. Ungathenga i-$ 100,000 ekuthengeni cishe ngama-$ 50 ngonyaka, kodwa ngokuvamile kuvumelekile izindleko zokwandisa lokhu kokusabalalisa okungaphezulu.
Ohlangothini olungaphezulu, ungakwazi ukulondoloza ekuhlinzekeni kokukhokhelwa kwezokwelapha. Kungakhathaliseki ukuthi ubani onecala engozini, lokhu kuzokukhokhela izikweletu zedokotela nezibhedlela - futhi ngezinye izikhathi ngisho nezindleko zokungcwaba - ngawe nabagibeli bakho. Kodwa ngaphambi kokunciphisa ukukhokhelwa kokukhokhelwa kwezokwelapha, hlola ukuze ubone ukuthi inhlanganisela yempilo yakho nempilo yomshuwalense wezempilo izofaka lezi zinto. Uma kunjalo, ungenza ngokuphepha ngaphandle kwalolu khetho, okungakusiza okungenani u-$ 100 ngonyaka.
Gary Bailey Yiba Izinkampani Zomshuwalense Ekhaya Eningizimu Ye-Afrika Uhlu
Author garybaileyPosted on March 8, 2019 March 8, 2019 Categories Izinkampani Zomshuwalense Ekhaya Eningizimu Ye-Afrika SandtonTags abahlinzeki bomshuwalense benkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, abahlinzeki bomshuwalense wezempilo wenkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, amazinga omshwalense wempilo yenkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, Classic car umshuwalense guide and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, Imibhalo yomshuwalense wasekhaya yaseNingizimu Afrika and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, imihlahlandlela yomshuwalense wemoto yakudala and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, imininingwane yomshuwalense wemoto yakudala and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, inkampani yomshuwalense wenkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, Inkampani yomshuwalense yenkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, inkampani yomshwalense wemoto yenkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, inkampani yomshwalense wezempilo yenkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, inkampani yomshwalense yenkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, inqubomgomo yomshwalense wezempilo yenkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, inqubomgomo yomshwalense yenkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, Isaphulelo somshuwalense ekhaya and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, izidingo zomshuwalense wenkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, izincomo zomshuwalense wenkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, izindleko zomshuwalense wemoto zakudala and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, izindleko zomshuwalense wenkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, izingcaphuno zemishuwalense ekhaya and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, izingcaphuno zomshuwalense ekhaya and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, izingcaphuno zomshuwalense zomzimba and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, izinhlelo zomshuwalense wamazinyo ezinkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, izinhlelo zomshuwalense wezempilo ezinkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, izinhlobo zomshuwalense ezinkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, izinkampani zomshuwalense ezinkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, izinkampani zomshuwalense wenkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, izinkampani zomshuwalense wezempilo and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, izinsizakalo zomshuwalense ezinkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, izinzuzo zomshwalense wemoto zakudala and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, okuyisisekelo somshuwalense wezimoto zakudala and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, thola i-inshuwalense yomndeni and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, uhlu lwezinkampani zakudala zomshuwalense wemoto and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, uhlu lwezinkampani zomshuwalense ezinkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, ukufaneleka komshwalense wemoto zakudala and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, ukuqhathaniswa komshuwalense ekhaya and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, umphathi womshuwalense wenkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, Umshuwalense wemoto engcono kakhulu ochwepheshe abasha and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, umshuwalense wemoto izinkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, umshuwalense wemoto ka-peter d james and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, umshuwalense wemoto ochwepheshe and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, umshuwalense wemoto ochwepheshe bezokwelapha and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, umshuwalense wemoto ochwepheshe bezomthetho and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, umshuwalense wemoto wabasebenzi abasha and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, umshuwalense wemoto webhizinisi and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, umshuwalense wemoto yezimoto zebhizinisi and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, umshuwalense wenkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, umshuwalense wenkampani kanye nobungozi and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, umshuwalense wezempilo wenkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, umshuwalense wokuthuthukisa izinkampani and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, umshwalense wemoto omdala oqinisekisiwe and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, umshwalense wemoto omdala wokulinganisa and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani, Umshwalense wemoto zakudala uchazwe and Izinhlobo Zomshuwalense Ezinkampani